လောကကြီးကနေအစောကြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူဒွေးရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ သားညီ – Nyi Ma Lay
လောကကြီးကနေအစောကြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူဒွေးရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ သားညီ
By Ko AyePosted on May 7, 2022
တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေ လေးစား ချစ်ခင် အားပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒွေး ကတော့ လူ့ဘဝကြီး ကနေ စောစောစီးစီး နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာ သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒွေးကွယ်လွန်သွားခဲ့ တာ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေနဲ့ မိသားစုတွေ ကတော့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ သတိရ အောက်မေ့နေဆဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မေလ (၇) ရက်နေ့ကတော့ ဒွေးရဲ့ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပြီး ဒွေးရဲ့ ညီအရင်းဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ သားညီ က အစ်ကိုဖြစ်သူ မသိနိုင်တော့ တဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးကို အခု လိုပဲ ဆုတောင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။
“7 .5. 2022 သူ မရှိတော့ဘူး ဆိုပေမယ့် ရှိနေသေး သလိုပဲ အမြဲ ခံစားမိ နေလိုပါ။ ဘယ်တော့မှလည်း မေ့ပျောက် သွားမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ဒီစကားကို ပြောကောင်းသလား မပြောကောင်းဘူးလား လည်း မသိပါဘူး။ တစ်ကယ်လိုများ နောက်ဘဝ ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် အဲ့ ဘဝမှာလည်း လူဖြစ်ခွင့် ရကြပြီး အခုဘဝလိုမျိုး တော်စပ် ပတ်သက်ခွင့် ရခဲ့မယ် ဆိုရင် အခုပြောမယ့် စကားလေးကို နှစ်ပေါင်း များစွာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခဏ ခဏ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ပြောခွင့်ရပါ စေလို ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းနေပါတယ်။ “ ! Happy Birthday …” ပါ Bro ! သားညီ …” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
သားညီ ကတော့ လူ့ဘဝထဲ မှာ မရှိတော့တဲ့ အစ်ကို ဖြစ်သူဒွေး အတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးခဲ့ပြီး နောက်ဘဝဆို တာတွေရှိရင် အစ်ကို ဖြစ်သူကို နှစ်ပေါင်း များစွာမွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးခွင့် ရချင်ကြောင်း လေးလေးနက်နက် ပြောလာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
တစ္နိုင္ငံလုံးက ပရိသတ္ေတြ ေလးစား ခ်စ္ခင္ အားေပးရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဒြး ကေတာ့ လူ႔ဘဝႀကီး ကေန ေစာေစာစီးစီး ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒြးကြယ္လြန္သြားခဲ့ တာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ မိသားစုေတြ ကေတာ့ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ သတိရ ေအာက္ေမ့ေနဆဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေမလ (၇) ရက္ေန႔ကေတာ့ ေဒြးရဲ့ ေမြးေန႔ေလး ျဖစ္ၿပီး ေဒြးရဲ့ ညီအရင္းျဖစ္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါရိုက္တာ သားညီ က အစ္ကိုျဖစ္သူ မသိနိုင္ေတာ့ တဲ့ ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းေလးကို အခု လိုပဲ ဆုေတာင္းေပးလာခဲ့ပါတယ္။
“7 .5. 2022 သူ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုေပမယ့္ ရွိေနေသး သလိုပဲ အျမဲ ခံစားမိ ေနလိုပါ။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ေမ့ေပ်ာက္ သြားမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒီစကားကို ေျပာေကာင္းသလား မေျပာေကာင္းဘူးလား လည္း မသိပါဘူး။ တစ္ကယ္လိုမ်ား ေနာက္ဘဝ ဆိုတာ ရွိခဲ့ရင္ အဲ့ ဘဝမွာလည္း လူျဖစ္ခြင့္ ရၾကၿပီး အခုဘဝလိုမ်ိဳး ေတာ္စပ္ ပတ္သက္ခြင့္ ရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ အခုေျပာမယ့္ စကားေလးကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခဏ ခဏ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေျပာခြင့္ရပါ ေစလို ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ ဆုေတာင္းေနပါတယ္။ “ ! Happy Birthday …” ပါ Bro ! သားညီ …” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားလာခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။
သားညီ ကေတာ့ လူ႔ဘဝထဲ မွာ မရွိေတာ့တဲ့ အစ္ကို ျဖစ္သူေဒြး အတြက္ အမွတ္တရ ေမြးေန႔ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဘဝဆို တာေတြရွိရင္ အစ္ကို ျဖစ္သူကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေမြးေန႔ဆုေတာင္း ေပးခြင့္ ရခ်င္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္ ေျပာလာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။
Previous post မေမေ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဆံပင်ညှပ်တာကိုပြုံးပြုံးကြီးအငြိမ်ခံနေတဲ့ သားလေးရဲ့ ချစ်စဖွယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ချပြလာတဲ့ မြတ်ရတနာကျော်
Next post စောင့်မျှော်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ပထမဆုံးသီချင်း official music video လေးထွက်ပြီနော်